Egwuregwu Igwe na-abịa Red Hat Process Automation Manager | Site na Linux
Nkuzi igwe na abia Red Hat Process Automation Manager
Red Hat Inc. kwupụtara na emelitere Fraịde gara aga gị Red Hat Process Automation Manager ụlọ na ike ịkọ ihe nlere ike dabere na mmụta igwe, ọtụtụ ndozi interface ndị ọrụ na mkpebi na-eji micro frontend architectures. Na mgbakwunye na nkwalite ndị ọzọ ebumnuche iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ n'ozuzu maka ndị ahịa akpaaka Hat Hat, atụmatụ ndị a na-ewusi igbe ọrụ onye nrụpụta azụmaahịa.
Akpaaka Uhie akpaaka bụ ụlọ nke ngwaahịa maka ịmepụta mkpebi na usoro azụmahịa site na ime ka mmekorita di nkpa n'etiti IT na ndi otu ahia. Nke a aka na- Ndị otu IT ka - ijide ma kwado usoro atumatu ahia na usoro, rụọ ọrụ azụmahịa na-arụ ọrụ ma tụọ nsonaazụ azụmaahịa na gburugburu dị iche iche, gụnyere anụ ahụ, mebere, ekwentị mkpanaaka, na igwe ojii.
Ngwunye ngwanrọ, nke akpọburu ya JBoss Business Process Management Suite, na - ejikọ BPM na njikwa azụmaahịa azụmaahịa, njikarịcha azụmaahịa azụmaahịa, na nhazi ihe omume dị mgbagwoju anya n'otu ikpo okwu iji mepee ngwa dabere na ngwanrọ nke ngwanrọ na microservices.
Ha na-anọchi anya ụzọ imepụta ngwa na ikpokọta akụrụngwa omume rụrụ iji melite ntachi obi ma mepee mmepe. Gwé ojii ahụ dabeere na igwe ojii na-arụ ọrụ igwe ojii na onyonyo akpa nke enwere ike itinye ya na mkpokọta OpenShift Red Hat.
Na ụdị ọhụrụ ahụ, agbatịwo ihe owuwu microservices maka mmepe nke njirimara onye ọrụ na ụzọ nke ụlọ ọrụ na-akpọ "micro-frontend architectures."
Phil Simpson, Red Hat JBoss Onye na-ere ahịa ngwaahịa M na-ekwu na:
"Ọ bụ ụzọ iji mejupụta njirimara onye ọrụ site na akụkụ onye ọ bụla na-anaghị amata ibe ya."
Site na nsụgharị ọhụrụ site na Red Hat Process Automation, ndị ahịa nwere ike ibubata ma gbaa ụdị amụma ndị akọwapụtara na Amụma Nlereanya Anya Nlereanya (PMML,, otu ụlọ ọrụ maka ijikọ ọnụ ma gbanwee ozi n'etiti igwe mmụta mmụta igwe (ML) ebe a na-emepụta ụdị amụma na azịza ya na ngwa njikwa njikwa nke na-eji ụdị ndị ahụ eme ka iwu machie iwu maka nsonaazụ azụmaahịa ụfọdụ.
Na-agbaso Model Model Business na Ndetu 2.0 na Mkpebi Mkpebi na Nkọwapụta 1.2, nke bụ ụkpụrụ emeghe maka ịkọwa na ịdekọ usoro azụmahịa nke bara uru na nyocha ihe nlere na ịkọ akụkọ nchịkwa.
Agbanyeghi na amara okpu mara amara maka akụrụngwa akụrụngwa ya, ọ nwekwara nnukwu azụmaahịa mmepe ngwa, nke usoro nhazi akpaaka dabara.
Simpson kwuru, "Ọ bụ obere akụkụ nke azụmahịa anyị niile, mana otu n'ime ebe anyị na-eto ngwa ngwa."
Ebumnobi nke a kacha ọhụrụ bụ ime ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ike ịnweta ndị na-abụghị ndị ọkachamara azụmaahịa na ndị mmepe.
Usoro akpaaka Manager dabere na Drools, ọrụ mmeghe mepụtara Red Hat na agwakọta engine iwu iwu, ihe oru ntanetị yana ngwa njikwa iwu.
Na mgbakwunye nke ikike mmụta igwe, a pụrụ itinye ngwa ngwa dabere na usoro ọzụzụ na-enye ha ohere ịme mkpebi ka mma dabere na omume ndị gara aga.
Iji maa atụ, na ọnọdụ nnabata otuto,
"Ha nwere ike ịnyefe ọtụtụ mkpebi kredit ma mepụta ụdị amụma na-ekpebi otu esi eme mkpebi ndị ahụ n'ọdịnihu," ka Simpson kwuru. "Enwere ike imeziwanye iwu ala ma mee ka ọtụtụ ngwa" site na iji microservices.
Mgbanwe ndị ọzọs na mbipute a gụnyere nkwado nke ndụ na-akpaghị aka site na OpenShift Operators, usoro ngosipụta ka mma site na nyocha, nkwado maka ịrụ ọrụ na-aga n'ihu site na ntinye nke ọtụtụ ọnụ, nke na-echekwa ọdịda ọdịda na ndebiri ndebiri maka njikarịcha azụmaahịa azụmaahịa.
Iji gụọ nkwupụta Red Hat zuru ezu, ị nwere ike site na njikọ dị n'okpuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Nkuzi igwe na abia Red Hat Process Automation Manager
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Red Hat Enterprise Linux 8.1, mara akụkọ ya
Usbrip: akụrụngwa maka nsuso ngwaọrụ USB